Kapoka borosy matevina maromaro hamolavola ireo vorona voaloko menaka | Famoronana an-tserasera
Amin'ny kapoka haingana, Angela Moulton dia afaka mamorona sary hoso-doko an'ny vorona. Teknika iray izay manana ny fahasarotany sy noho ilay loko izay mihangona ao anatin'ireo tadiny haingana, dia mety hiteraka fahatsapana ny fanamaivanana.
Moulton dia mampiseho antsika koa ny fitiavany an'ity fiainana manana elatra ity izay hitantsika any amin'ny valan-javaboary sy zaridaina ary amin'ny loko feno menaka dia mizara ny loko mazava amin'ny sary hosodoko tsirairay.
Ny hatsaran'ny zavakanto dia afaka manome ny mpanakanto tsirairay ny nuansa sy ny fifandraisany amina lohahevitra manokana, ary izany angamba no ivon-jatony tamin'izy ireo nandritra ny am-polotaona sy taonjato maro.
Ny fitiavany lehibe indrindra dia ny fampiasana menaka handoko vorona maro loko amin'ny lamba rongony. Manampahaizana iray izay mahazo aingam-panahy avy amin'ny natiora sy ny lokony mba hampisehoana amintsika ny fomba fahazoany mitelina izay mifototra amin'ireo tadim-bolo marobe nomena azy sy tamin'ny fombany manokana.
Misaotra an'ity teknika ity izay ahafahantsika mahafantatra azy sy ny fikosohan-dohany fotsiny ka amin'ny vitsivitsy, miaraka borosy afaka mandeha amin'ny isa 14, azontsika atao ny misaintsaina ireo zavakanto kanto feno hazavana sy loko miaraka amin'ireo vorona asehon'i Moulton ireo.
Mpanakanto izay mandany ny fotoanany eo anelanelan'ny Illinois sy Idaho ary mivarotra ny sangan'asany tany am-boalohany sy ny fanonta ny sangan'asany. Azonao atao ny mijery Pratt Creek Art ary tadiavo ny sanganasa izay natolony ho an'ny rehetra mba hahafahany manana kopia ao an-tranontsika ary handravaka ny iray amin'ireo efitranonay amin'ny fomba tsara indrindra.
Mampiasa sehatra toa an'i YouTube koa izy io asehoy ny fomba fanaovanao ny asanao amin'ny kapoka matevina feno nuansa. Avelanay ianao Johan Scherft's watercolors an'ny vorona, koa feno nuansa sy hatsarana tsara ary koa fahakingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Amin'ny kapoka borosy haingana maromaro hanaovana sary hoso-doko an'ny vorona